Muuri News Network » XASAASI: Maxaadan Ogeyn oo maanta ka dhacay Xaruunta Ayuub ee Magaalada Marka.
XASAASI: Maxaadan Ogeyn oo maanta ka dhacay Xaruunta Ayuub ee Magaalada Marka.
Jun 17, 2016 - Comments off
Waxaa maanta kullan ku yeeshay xerada AMISOM ee degmada Marka qaar kamid ah wafdigii ka socday Koonfur Galbeed ee ku haray degmada Marka iyo weliba odayaasha,waxgarad ka degmada Marka.
Masuuliyiinta wafdiga K/Galbeed waxaa ka mid ahaa oo ugu horeeyay wasiir K/xigeenka arimaha gudaha iyo dowladaha hoose Mudane Xuseen Cali Xaaji, wasiir SHiekh macalim maxamed Maxamuud (Joins) iyo Xuseen Cali Hiindaay.
Kullanka ayaa looga dooday qaabka xal waara looga gaari karo dhibaatooyinkii in mudda ah ka taagnaa degmada marka; wafdiga ayaa sidoo kale sheegay in ay ka go, antahay in ay nabad ka dhaliyaan degmada.
Sidoo kale odayaasha ka qeybgalay kullanka oo ahaa odayaasha laf dhabarka u ah degmada Marka ayaa sheegay in ay iyaga dhankooda ka go, antahay in ay lashaqeeyaan wafdiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya.
Gebagebadii kullanka ayaa waxaa lagu dhawaaqay guddi uu madax uyahay gudoomiyaha degmada Marka Mudane Xassan Cumareey, waxaa kale oo gudiga kujira taliyaha AMISOM ee saldhigga Marka, odayaal, taliyayaasha ciidamada deegaanka iyo masuul ka socday dowladda dhexe.
Waxaa lagu ballamay in jawiga degmada la dejiyo inta laga keenayo ciidamo afar boqol ah oo loo tababaray deegaanka kuwaas oo dhawaan soo gaaridoono degmada islamarkaana lawareegi doono amniga degmada Marka.
Wasiir Xuseen Cali Xaaji ayaa ugu danbeeyntii meesha ka sheegay in ay sahlanaan doonto in la keeno degmada dhamaan adeegyadii ay shacabka ka sugayeen dowladda K/Galbeed mar hadii la helo ciidamo nidaam dowladeed leh oo suga amniga degmada iyo hareeraheeda.
Waxaa uu sidoo kale dadka deegaanka u cadeeyay in ay ka saari doonaan militariga gudaha degmada; gudaha degmadanaanan loo ogolaan doonin ciidan aanan wadan astaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaliya.
Waxa ay sidoo kale ka tashadeen gudigaan sidii loogu qeybin lahaa degmada Marka gar gaar mardhaw lafilayo in lagaarsiiyo waxaana la qorsheeyay meelaha lageynayo iyo sida loo qeybinayo maadaama dadka ay ka soo kabanayaan colaado waqti badan qaatay.
ISHA WARARKA OO——–DHAN